တရုတ် Mills Cutter, အဆုံးစက်, Mills Tools များစက်ရုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Cutter Milling
Cutter Milling ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Cutter Milling, အဆုံးစက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကြိတ် Tools များ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြင့်မားသောတိကျ CNC ကြိတ်ရှုး
CNC ကြိတ်စက် km45 ဒီဂရီ-12 မျက်နှာစက်များ
CNC ကြိတ်စက် 90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာစက်များ
CNC ကြိတ်စက်များအတွက် EMR မျက်နှာစက်များ
CNC ခုံစိတျအပိုငျး 75 ဒီဂရီမျက်နှာစက်များ RAP
မြင့်မားသောတိကျ CNC ကြိတ်ရှုး အမြင့်တိကျစွာကြိတ်ရှုး, စက်များတွင်စက် tool ကိုစိတျအပိုငျး။ အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi , CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ ,...
Supply နိုင်ခြင်း: 100000pieces/year
CNC ကြိတ်စက် km45 ဒီဂရီ-12 မျက်နှာစက်များ အဓိကအားဖြင့် collets ၏အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, B, T- tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , NT...
CNC ကြိတ်စက် 90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာစက်များ ကျနော်တို့ဆံ့မျက်နှာစက်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်: 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကကိုအသာပုတ်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့်...
CNC ကြိတ်စက်များအတွက် EMR မျက်နှာစက်များ ကျနော်တို့ TAP 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, RAP-75 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ,...
RAP-75 ဒီဂရီမျက်နှာစက်များ ကျနော်တို့ RAP-75 °မျက်နှာ Mills ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်; 90 °ညာဘက်ထောင့်လမ်းပခုံးမျက်နှာ Mills ကကိုအသာပုတ်; KM-45 °မျက်နှာ Mills, EMR က Round Dowel မျက်နှာ Mills က။ အများစုမှာပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပါ! အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး,...
တရုတ်နိုင်ငံ Cutter Milling ပေးသွင်း
1. Flat-အဆုံးကြိတ်ခုတ်, ကြမ်းတမ်း, ကွက်လပ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, သေးငယ်တဲ့ဧရိယာအလျားလိုက်လေယာဉ်သို့မဟုတ်ပုံပြီးများ၏ဖယ်ရှားရေး;
ကွေးမျက်နှာပြင်၏ Semi-ပြီးနှင့်ပြီးများအတွက် 2. Ball ကို-အဆုံးခုတ်; မတ်စောက်သောမျက်နှာပြင်များ / ဖြောင့်နံရံတွင်အငယ်စား chamfers ၏ဒဏ်ငွေကြိတ်များအတွက်အသေးစားဓါး။
3. chamfer နှင့်အတူအဆိုပါတိုက်ခန်းရှုးကွက်လပ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြမ်းကြိတ်လုပျနိုငျနှင့်လည်းပြီးအောင်-ကြိတ်နိုင်ပါတယ် (ကမတ်စောက်သောမျက်နှာပြင်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ) ဒဏ်ငွေပြားချပ်ချပ်အသေး chamfer ။
အခန်းထဲကခုတ်, T ကခုတ်သို့မဟုတ်စည်ခုတ်, သွားခုတ်, ပြည်တွင်းရေး R ကိုခုတ်အပါအဝင် 4. မှိုခုတ်။
5. chamfering tool ကိုနှင့် chamfering tool က chamfering ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့တူညီသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်နှင့် chamfering နှင့် chamfering နှင့်အတူကြိတ်ခုတ်သို့ခွဲခြားထားပါသည်။
ကို T-slot က milling 6. T ကဓါး,
ကြောင်းကြိတ်ထွက်ထိုကဲ့သို့သောဂီယာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသွားပုံစံများ,7သွားဓါး။
8. Rough ဓါး, လူမီနီယံ-ကြေးနီအလွိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြမ်းတမ်းကြိတ်ရှုးအလျင်အမြန်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။
ကြိတ် Tools များ
Chuck Arbore Drilling NT